काठमाडौंमा सुरुभयो बालेन आतंक! बैठक भत्तामा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ - Media Dabali
काठमाडौंमा सुरुभयो बालेन आतंक! बैठक भत्तामा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिकको बजेट निर्माणका लागि वडाहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ ।
महानगरपालिकाले ३२ वटा वडालाई ठूला, मझौला र साना वडामा वर्गीकरण गरेर बजेटको सिलिङ पठाएको हो । वडा कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने प्रशासनिक,सामाजिक र पूर्वाधार खर्चतर्फ निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेर सात दिनभित्र सिलिङ पठाउन महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले परिपत्र गरेका छन्।
३२ वटै वडाले गरेर आउँदो वर्षका लागि दुई अर्ब ७१ करोड ५३ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट माग गर्न सक्नेछन् । महानगरले बजेटको सिलिङ बनाउँदा पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि चार लाख ३२ हजार रुपैयाँ भित्रै रहने गरी बनाउन भनेको छ ।
यसरी ३२ वटा वडाले पदाधिकारीको बैठक भत्तामा एक करोड ३८ लाख २४ हजार रुपैयाँसम्म बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै पानी बिजुलीका लागि ६४ लाख, सञ्चार महसुलका लागि १५ लाख ३६ हजार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा ८८ लाख, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्चमा ३२ लाख र विविध खर्चमा ८० लाख रुपैयाँसम्म बजेट माग गरेर खर्च गर्न सक्नेछन् ।
स्थापितपछि बालेन शाह पनि विवादमा, आफ्नो सबै गीतमा महिलालाई हेपेको गुनासो
बालेन शाहलाई स्थापितले गम्भीर आरोप लगाएपछि खैलाबैला, एमाले पत्तासाफ हुने संकेत !
काठमाडौंमा बालेन शाहको विशाल अग्रता,कसले कति मत ल्याए ?
डिल्ली बजारको मत गन्दा बालेनलाई आपत, सिर्जनालाई राहत !
काठमाडौंमा ठूला पार्टी माथि बालेन एक्लै भारी, यस्तो छ ताजा मत परिणाम
काठमाडौंमा उल्टियो मत परिणाम, बालेनलाई झट्का !
बुधवार, जेठ ४ २०७९०३:२३:३८